यस्ता ७ व्यक्तिले अनार भुलेर पनि नखानुहोला - अनारको बोक्राको पनि यति धेरै फाइदै फाइदा - ज्ञानविज्ञान
अनार महँगो छ !
अनार खानुका १० फाइदा :
१. अनारको नियमित सेवनले शरीरमा रगतको कमी हुन दिँदैन । साथै अनार मुटुका रोगीहरुका लागि समेत लाभदायी हुन्छ । नियमित अनारको जुस पिउँदा तन्दुरुस्ती प्राप्त हुनुका साथै रक्त सञ्चालन प्रक्रियालाई फाइदा गर्छ ।
३. अनार खाइरहने व्यक्तिलाई हृदयाघात र स्ट्रोकको जोखिम कम हुन्छ ।
५. अनारको नियमित सेवन गर्नाले प्रोस्ट्रेट क्यान्सर लाग्ने जोखिम कम हुन्छ ।
९. बुढ्यौलीमा बिर्सिने समस्या भएका ब्यक्तिहरुले अनारको सेवन गर्नाले फाइदाजनक हुन्छ ।
अनार कसरी प्रयोग गर्ने ?
वर्तमान समयमा दूषित र अनियमित खानपानले गर्दा मानिसलाई विभिन्न किसिमका छाला सम्बन्धि समस्या हुने गरेका छ । । जुन मानिसहरुलाई उमेर भन्दा पहिल्यै एन्टिएजिङको समस्या भोग्नु पर्छ वा चाउरियोको छालाले गर्दा लज्जित हुनुपर्छ ।
उनीहरुका लागि अनारको हरियो पत्ताको पेस्ट धेरै नै फाइदाजनक सावित भएको छ । हरियो पत्ताको पेस्ट नियमित रुपमा लगाउनाले चारियोको छालाको समस्या हराएर जान्छ ।
सो क्रममा कमजोर भनिएका केही पुरुष तथा महिलालाई राखी १५ दिन सम्म दिनहु एक गिलास अनारको जुस खुवाएका थिए । १५ दिन खाएको जुसले उनीहरुमा टेस्टोस्टेरोन हार्मेनका स्तर निकै बढ्यो । जव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ्यो, कमजोर ठानिएका पुरुष तथा महिलाहरुले एकाएक उत्कृष्ठ ढंगले यौनव्यवहार देखाउन थाले ।
विश्वविद्यालयका अनुसार यो अनुसन्धानमा २१ देखी ६४ वर्षका पुरुष र महिलामा गरिएको थियो । टेस्टोस्टेरोन हार्मेनले नै किशोर अवस्थामा पुरुषहरुमा दाह्री जुगा उमार्ने, स्वर परिवर्तन हुने, काखीमुनी रौ उमार्ने, तथा महिलाहरुको स्तन बढाउने काम गर्छ । त्यो सँगै यौन इच्छा समेत बढाउदै लैजान्छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार १५ दिन लगातार जुस खादा टेस्टोस्टेरोनको स्तर १६ प्रतिशत बाट बढेर ३० प्रतिशत सम्म पुगेको पाइएको थियो ।
Don't Miss it किन काउकुती लाग्छ र लागेपछि किन हाँसउठ्छ ? जान्नुहोस
Up Next कसरी अक्षरलेखन सुधार्ने आफ्नाे बच्चाकाे ? यस्ता छन् उपाय